Noolaha badda ee loo yaqaan 'Pelagic iyo benthic', maxay ku kala duwan yihiin? | Kalluunka
Badaha iyo badduba, shaki la’aan, waa mid kamid ah ilaha laga helo ugu qanisan, xaga kala duwanaanshaha noolaha, meeraha Dhulka. Guryaheeda gudihiisa waxaa ku nool marti aan la tirin karin oo ka dhiga meelo xiiso leh. Martida kala duwan, gaar ahaan, qaabkooda, cabirkooda, midabkooda, caadooyinkooda, qaababka quudintooda, iwm.
Sida iska cad, nidaamka deegaanka ee biyaha ayaa aad u kala fog midba midka kale. Astaamahoodu aad bay u kala duwanaan karaan, taas oo saamayn ku yeelanaysa, qaab gaar ah, kooda awood lagu noolaado iyo in kale.
Caqli ahaan, xaaladaha nololeed ee biyo mareenka ama xeebta agteeda isku mid ma aha. Halkaas, ileysku waa ka sii badan yahay, heerkulku wuxuu marayaa kala duwanaansho badan, socodka iyo dhaqdhaqaaqa biyuhuna way badan yihiin waana khatar yihiin. Si kastaba ha noqotee, markaan hoos ugu dhaadhacno moolka, waxaan helnaa sawir gebi ahaanba ka duwan. Sababtaas awgeed, nooluhu aad buu u kala fog yahay waxayna kuxirantahay aagga badda ama badda ay noloshooda ku horumariyaan.
Waa halkan laba erey oo laga yaabo inaynaan garanaynin inay muuqdaan: diifaysan y benthic
1 Pelagic iyo benthic
2 Qeexida noolaha diirran
3 Kalluunka Pelagic
3.1 Xeebaha xeebta
3.2 Xeebaha Oceanic
4 Isku mid ahaanshaha noolaha noolaha
5 Qeexida noolaha benthic
6 Kalluunka Benthic
7 Isku mid ahaanshaha noolaha benthiciska
Pelagic iyo benthic
Pelagic waxaa loola jeedaa qaybta badda ee ka sareysa aagga belaayada. Taasi waa, tiirarka biyaha ee aan ku oollin shelf-ka ama qolof-weynaha, laakiin uga dhow. Waa fidinta biyaha oo aan lahayn qoto dheer. Dhinaceeda, benthic waa ka soo horjeedka. Waxay la xiriirtaa wax walba ku xiran badda iyo sagxadda badda.
Qiyaas ahaan, noolaha biyaha ku nool, oo ay ka mid yihiin kalluunka, ayaa loo kala saaray laba qoys oo waaweyn: noolaha diirran y noolaha benthic.
Marka xigta, waxaan sii wadaynaa inaan sharaxno mid kasta oo iyaga ka mid ah:
Qeexida noolaha diirran
Markaad ka hadlayso noolaha noolaha, waxaan ula jeednaa dhammaan noocyadaas ku nool biyaha dhexe ee badaha iyo badaha, ama agagaarka dusha sare. Sidaa darteed, way iska cadahay in noolaha noocan ah ee ku nool biyaha ay si weyn u xaddidayaan xiriirka meelaha qoto dheer.
Waxaa loo qaybiyaa meelo si fiican u shidan, oo ka bilaabma dusha lafteeda illaa 200 mitir oo qoto dheer. Lakabkaan waxaa looyaqaanaa aagga phiotic.
Waa in la ogaadaa in cadowga ugu weyn ee noolahaas oo dhan uu yahay kalluumeysi aan kala sooc lahayn.
Waxaa jira laba nooc oo noolaha noocan ah: nekton, plakton iyo neuston.
Dhexdeeda waxaa ku jira kalluun, qoolley, cetaceans, cephalopods, iwm. Nooleyaasha, mahadcelin dhaqdhaqaaqooda, waa awood u leh kahortaga qulqulka badda.
Iyagu waa lagu gartaa, aasaas ahaan, iyagoo leh cabir yar, mararka qaarkoodna cqaadir. Waxay noqon karaan nooca khudradda (phytoplankton) ama nooca xayawaanka (zooplankton). Nasiib darrose, noolahaas, jidhkooda awgood, ma garaaci karaan qulqulka badda, marka iyagaa jiidaya.
Iyagu waa kuwa nool ee ka dhigay filimka dusha sare ee biyaha gurigooda.
Haddii aan diirada saarno kooxda ay ka kooban yihiin kalluunka saliida leh sidan oo kale, waxaan sameyn karnaa hoosaad kale, oo been ah, si la mid ah, iyadoo kuxiran aagagga biyaha ee ay ku badan yihiin:
Noolaha cilladaysan ee xeebtu badanaa waa kalluun yar yar oo ku nool iskuulo waaweyn oo ku wareega wareega shelf ee qaaradda una dhow dusha sare. Tusaale ahaan tan waa xayawaan sida anchovies ama sardines.
Kooxdan dhexdeeda waxaa ku jira noocyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn ee u soo guura. Dhammaantood waxay leeyihiin astaamo, anatomical and physiological, labadaba aad ugu eg kuwa eheladooda xeebta, halka qaababka quudintoodu u kala duwan yihiin.
In kasta oo ay leeyihiin koritaan deg deg ah iyo bacrimin sare, cufnaanta dadkoodu aad bay u hooseysaa, taasoo ka dhigaysa horumarkooda mid gaabis ah. Tan badanaa waxaa ugu wacan xaqiiqda ah inay ku xiran yihiin kalluumeysi ballaaran.
Kalluunka sida tuna iyo bonito ayaa ah noocyo caadi ah oo ka mid ah noolaha noolaha ee badweynta.
Isku mid ahaanshaha noolaha noolaha
Maaddaama ereyga 'pelagic' loola jeedo aag cayiman oo ka mid ah badda iyo badweynta, erey sidoo kale soo baxa oo loo adeegsado in lagu xuso meeshiisa sida ay tahay "abyssal". Oo haddaba, si la mid ah sidaan u tixraacno noolaha iyo kalluunka, waxaan sidoo kale ugula tacaali karnaa sida kalluunka ama noolaha yaamayska.
Qeexida noolaha benthic
Noolaha Benthic waa kuwa kuwada nool asalka deegaanka deegaanka, si ka duwan noolaha noolaha.
Meelahan badda hoosteeda halkaasoo iftiinka iyo hufnaanta ay ka muuqdaan, in yar, haa, waxaan ka helaynaa soosaarayaasha asaasiga ah benthic sawir qaadeyaasha (awood u leh inay soo saaraan cunadooda).
Horaa loogu dhex galay asalka ah, iftiin la'aan oo ku taal meel mool dheer, waxaa jira nooleyaal wax cunaya, kuwaas oo ku tiirsan hadhaaga dabiiciga ah iyo nooleyaasha culeyska jiida ee ka yimaada heerarka biyaha ee dusha sare leh si ay naftooda u quudiyaan.
Kiis gaar ah waa bakteeriya, dhinaca kale kiimiko yar yar iyo dhinaca kale wada hadal (Waxay ku tiirsan yihiin nooleyaal kale), kuwaas oo ku yaal aagag uur-ku-taallo ah iyada oo ay jiraan meelo gaar ah oo ka mid ah cirifka badwaynta badweynta.
Jaleecada hore, layaab ma leh in, ka dib markaan akhrino waxa kor ku xusan, inaynaan aad u aqoonayn noolaha benthiciska. Ma jiraan wax intaa ka sii badan oo runta ah. Waxaa jira noocyo lala xiriiriyo oo caan ku ah caanna ku ah dhammaantood: meerayaasha.
Shaki la'aan, dhagaxyada dhuxusha waa mid ka mid ah alaabada ugu qiimaha badan ee dhulka hooyo. Si kastaba ha noqotee, iyo nasiib daro, iyagana waa kuwa ugu hanjabaada badan. Qaar ka mid ah farsamooyinka kalluumeysiga, mararka qaarkood si aan caadi ahayn, ayaa dila. Waxaan kahadalnaa, tusaale ahaan, shabaagta shabaagta, taas oo sababta dhibaatooyinka deegaanka ee daran.
Nooleyaal badan oo kale ayaa qayb ka ah qoyska weyn ee benthic. Waxaan ka hadalnaa echinoderms (xiddigaha iyo ururada badda), the qallooca (kabaha iyo wixii la mid ah), the cephalopods (kalluumeysiga iyo kalluunka gogo ', the bivalves y mollusks iyo noocyada qaar ka mid ah badaha.
Sida aan kor ku soo sheegnay, noolaha benthicia gudaheeda waxaan ka helaynaa noocyada kalluunka ee loo kala saaray "peluronectiform", oo ka mid ah amarka kalluunka flounder, diiqii iyo kalidii.
Kalluunkan waxaa lagu gartaa inuu leeyahay qaab-dhismeed u gaar ah. Jidhkiisa, oo si muuqata u cadaadiyey dhinaca, sawir a qaab fidsan, cidna ugama tagto. Of shiil, waxay leeyihiin qaab isweydaarsi dhinac ah, oo isha ku haya dhinac kasta. Isku ekaansho dhinaca dambe ah oo baaba'aya markay horumaraan. Dadka qaangaarka ah, oo ku tiirsan mid ka mid ah dhinacyadooda, waxay leeyihiin jir fidsan qaarna waxaa lagu habeeyaa dhinaca kore.
Sida caadiga ah, iyagu waa kalluunka hilibka cuno iyo ugaarsiga, kuwaas oo qabashadooda lagu fuliyo iyadoo la adeegsanayo farsamada dabagalka.
Noocyada ugu caansan, maadaama ay yihiin kuwa ugu badan ee lagu isticmaalo kaluunka iyo kaluumeysiga, waa kaligiis iyo turbot.
Isku mid ahaanshaha noolaha benthiciska
Haddii aan dib u eegno buugaagta sayniska ee kaladuwan ee loogu talagalay taxonomy iyo kala soocida boqortooyada xoolaha, waxaa laga yaabaa inaan ka helno noolaha iyo benthic si fudud "Bentos" o "Benthic".
Dabeecaddu waa adduun xiiso leh, nidaamyada deegaanka ee ku jira biyahana waxay mudan yihiin cutub u gaar ah. Ka hadalka noolaha noocan ah ee loo yaqaan 'pelagic and benthic' waa wax aad u adag oo aad u adag. Dib-u-eegidgan yar wuxuu ku nuuxnuuxsanayaa, istaroog ballaaran, faahfaahinta mid ka duwan kan kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Kalluunka » Noolaha badda ee Pelagic iyo benthic
sawir fiican iyo soo koobid wanaagsan
wax kale maahan inaad ku sii socotid sidan oo kale aad baanna kuugu mahadnaqayaa calos, mar horeba k, aad bay faa'iido u lahayd
Jawaab jose fernando obama
runtu waxay iila muuqatay mid aad ii xiiso badan, waxay ahayd mid wax tar leh inaan ku laabto mowduucan, salaan.
Ku jawaab javier chavez